Ihe ngosi GIF banyere ezigbo egwu nke okpomoku uwa | Netwọk Mgbasa Ozi
Ọ dị ịtụnanya, mana a GIF o nwere ike ime ka anyị mata ihe ezigbo nsogbu okpomoku zuru uwa na-ebute. Onye Britain bụ onye nyocha Ed Hawkins mepụtara ya, ma gosipụta n'ụzọ dị mfe etu ọnọdụ okpomọkụ si arị elu kemgbe 1850, yana otu anyị si eru nso iru Celsius 2.
Mmụba nke okpomọkụ bụ ihe kacha echegbu onwe ya, na nke ọzọ, ọ kachasị mfe ịchọpụta. Ọ bụrụ na anyị gafee ọnụ ụzọ nke 2ºC, ihe ga-esi na ya pụta ga-egbu egbu. Anyị bụ dị nnọọ nso iru ha.
Hawkins, onye na-arụ ọrụ na National Centre for Atmospheric Sciences na Mahadum ọgụgụ, na United Kingdom, gara iji gosi mgbanwe ndị a na-eme ugbua n'ụzọ dị iche iche iji meziwanye nkwukọrịta, nke bụ ihe doro anya. O yikwara ka o nwere ihe ịga nke ọma. GIF na-egosi gburugburu polygonal na chee ozi ahụ naanị hụ ya.
Ntughari obula na-anọchi anya mmụba nke okpomọkụ, nke na-agbanwe ọnwa kwa ọnwa na afọ iri mgbe afọ iri gachara. Mgbe ị hụrụ na ha niile na-atụgharị n’otu ụzọ ahụ, n’ikpeazụ ị ga-akwụsị ichegbu onwe gị, n’ihi na ị ga-enweta ozi doro anya doro anya: okpomoku zuru ụwa ọnụ dị adị, ebe ọ bụ na 1850 akwụsịbeghị ịba ụba. Lee ị ga - ahụ GIF:
Dị ka a pụrụ ịhụ, site na 1990 nnukwu ịwụ elu mere. Okwu a siri ike. A na-agbaji ndekọ okpomọkụ n'oge na-adịghị anya kwa ọnwa, ma ọ bụrụ na nke a gaa n'ihu, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na tupu anyị echee, ọnọdụ okpomọkụ zuru ụwa ọnụ ga-abawanye site na ogo Celsius dị egwu abụọ.
Ya mere, ọ bụ ezigbo egwu na anyị ga-eche ihu ozugbo enwere ike. Ọ bụ ezie na ndị isi ụwa bụ ndị nwere ike ịmekwu ihe maka ụwa, ụmụ amaala nkịtị nwere ike ime ihe, gụnyere Egweri, re-eji, emebilama ọ bụ zọpụta mmiri.
Anyị niile nwere ike imezi ọnọdụ ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Ihe ngosi GIF gbasara ezigbo egwu nke okpomoku uwa